अपराह्न ४ बजे शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिकाे शपथग्रहण - Naya Patrika
राष्ट्रपतिमा भण्डारी पुनः निर्वाचित
खसेको मतको ७७% भण्डारीलाई
विद्यादेवी भण्डारी पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छिन् । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी भण्डारी संघ र प्रदेश सभाका सांसदको ३९ हजार दुई सय ७५ मतभार प्राप्त गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनले खसेको ५१ हजार पाँच सय १२ मतभारको करिब ७७ प्रतिशत ल्याइन् । यो कुल मतदाताको मतभार अर्थात् ५२ हजार पाँच सय एकको करिब ७५ प्रतिशत हो ।
कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी कुमारीलक्ष्मी राईले ११ हजार सात सय ३० मतभार पाइन् । उनले संघीय संसद्का सदस्यबाट ६ हजार एक सय ६२ मतभार अर्थात् ७८ सांसदको मत पाइन् । त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यबाट पाँच हजार पाँच सय ६८ मतभार अर्थात् प्रदेश सभाका ११६ सांसदको मत पाइन् ।
कुल ८८० मतदातामध्ये ८६२ जना मतदानमा सहभागी भए । मतदान गर्नेमा संघीय संसद्का ३२६ र प्रदेश सभाका ५३६ सांसद छन् । संघीय संसद्का पाँच र प्रदेशका १३ गरी १८ सांसद अनुपस्थित रहे । राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भण्डारीलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र मंगलबार नै बुझाएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा शपथग्रहण गर्नेछिन् ।
जम्मा मतदाता : ८८०
जम्मा खसेको मत : ८६२
सदर मत : ८५४
बदर मत : ८ (संघ– ३ मत, प्रदेश– ५ मत)
जम्मा मतदाता – ३३१
खसेको मत – ३२६
जम्मा मतदाता –५४९
खसेको मत – ५३६
पाएको जम्मा मतभार : ३९,२७५
भण्डारीले पाएको संघको मतभार : १९,३५५ (२४५ सांसद)
भण्डारीले पाएको प्रदेशको मतभार : १९,९२० (४१५ सांसद)
पाएको जम्मा मतभार : ११,७३०
राईले पाएको संघको मतभार : ६१६२ (७८ सांसद)
राईले पाएको प्रदेशको मतभार : ५५६८ (११६ सांसद)
कांग्रेस उम्मेदवारलाई आफूबाहेक अन्य दलका ३ सांसदको मत
संघीय संसद्मा कांग्रेसका ७६ सांसद छन् भने प्रदेशमा ११३ सांसद छन् । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका संघीय संसद्का ७५ सांसदले मात्र भोट हाले भने प्रदेश सभाका ११२ सांसदले भोट हाले । तर, कांग्रेसकी उम्मेदवार राईले पाएको मतभारअनुसार संघमा कांग्रेसलाई ७८ सांसदले भोट हाले भने प्रदेश सभाका ११३ सांसदले भोट हाले । जुन मतदान गर्ने कांग्रेसका उम्मेदवारभन्दा संघमा ३ र प्रदेशमा ३ मत बढी हो । यसबाट कांग्रेस उम्मेदवारलाई आफ्नो दलबाहेक संघ र प्रदेशमा ३–३ गरी ६ जना सांसदले मत दिएको पाइएको छ ।
१८ जनाले भोट हालेनन्
राष्ट्रपति निर्वाचनमा १८ जना सांसद अनुपस्थित भए । संघीय संसद्का पाँचजना र प्रदेश सभाका १३ सांसदले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिएनन् । नयाँ शक्ति, नेमकिपाका संघ तथा प्रदेशका सबै सांसदले निर्वाचनमा भाग लिएनन् भने प्रदेश सभामा मात्र प्रतिनिधित्व पाएको विवेकशील पार्टीका सांसद पनि निर्वाचनमा सहभागी भएनन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त दलका केही सांसदले समेत भोट हालेनन् । भोट नहाल्नेमा संघिय संसदतर्फ कांग्रेसका १, राजपाका २ जना छन् । अरु २ जना भने स्वतन्त्र हैसियतका सांसद हुन् ।
प्रदेशसभाका कांग्रेसका १, राजपाका ३, संघिय समाजवादी फोरमका १, नयाँ शक्तिका ३, विवेकशिल साझाका ३ र नेमकिपाका २ सांसद अनुपस्थित रहे ।
संघिय संसदका ५ सांसद अनुपस्थित
डा. बाबुराम भट्टराई – नयाँ शक्ति नेपाल (स्वतन्त्र)
प्रेम सुवाल – नेमकिपा (स्वतन्त्र)
प्रदेशसभाका १३ सांसद अनुपस्थित
जसको मतदाता नामावलीमा नाम थिएन
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएनन् । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको सपथ केहि समय रोकेपछि मतदाता नामावलीमा उनीहरू छुटेका हुन् । संघिय संसदतर्फका ३३४ मध्ये युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राई बाहेक ३३१ मतदाता थिए भने प्रदेशसभातर्फ ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत ५ बर्ष जेल सजाय सुनाइएका मनाङबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद दिपक मनाङ्गे बाहेक ५४९ सांसद मतदाता थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल मतभारको बहुमत ल्याउने राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कुल मतभारको बहुमत अर्थात ५२ हजार पाँच सय एकको बहुमत प्राप्त गरेपछि भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तिलप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
नेपालकी तेस्रो राष्ट्रपति
एमाले र माओवादीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी विद्यादेवी भण्डारी मंगलबार नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी हुन् । यसअघि ११ कात्तिक ०७२ मा नेपालको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी त्यसबेला एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । नेपालमा गणतन्त्र घोषणापछि ६ साउन ०६५ मा कांग्रेसका तत्कालिन सहमहामन्त्री डा. रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
नयाँ शक्ति, विवेकशील साझा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । मुलुकको संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका व्यक्ति हुनुपर्नेमा एउटा पार्टीभित्र पनि गुटको व्यवस्थापन गर्ने पद बनाइएकाले निर्वाचन बहिष्कार गरेको ती दलको दाबी छ ।